Alakamisy, Desambra 6, 2012 Alarobia, Desambra 5, 2012 Douglas Karr
Herintaona lasa izay, nanana mpanjifa niantso anay izahay ary mikoropaka izy ireo. Namafa mpampiasa iray tamin'ny rafitr'izy ireo izy ireo ary tompony daholo ny atiny ka voafafa ihany koa ny atiny. Tsy nisy intsony ny atiny. Asa amam-bolana hametrahana ny tranokala… nandona am-po daholo ny rehetra. Ny fifandraisanay dia ny hananganana ny lohahevitr'izy ireo fotsiny fa tsy hitantana ny fampiantranoana sy ny fampiharana marina. Vokatr'izany dia tsy nanana afa-tsy isika